Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG jumlada iyo soosaarayaasha | Gaoqiang
Polycarboxylate ether biyo-yare sare ayaa ah jiilka saddexaad ee superplasticizer oo ku saleysan kaalshiyam lignosulphonate iyo naphthalene sulfonate. SUNBO PC-1030 waa bilaash qulqulaya, budada lagu buufiyo-qalalan oo lagu hagaajiyay boodh khaas ah oo lagu buufinayo tiknoolajiyada qalalan.
Magaca: isopentenyl polyoxyethylene ether
Qaacido-hoosaad: CH = C (CH) CHCHO (CHCHO) nH
Fasal: nonactic surfactant
Magaca: methallyl polyoxyethylene ether
Qaaciddada Molecular: CH = C (CH) CHO (CHCHO) nH
Nooca: Wax-soosaarayaasha nonionic
Tilmaamayaasha jirka iyo kiimikada
PH (5% xalka biyaha)
Qiimaha Hydroxyl, mgKOH / g
Waxyaabaha PEG (%)
Heerka haynta labiska ah (%)
Waxqabadka iyo Codsiga:
1. Badeecadani waa mid aan sun lahayn, oo aan xanaaq lahayn, waxay leedahay biyo-dhalaal wanaagsan, waxay ku milmi kartaa biyaha iyo dareerayaasha kala duwan ee dabiiciga ah, waana alaab ceeriin muhiim u ah jiilka cusub ee mashiinnada xabagta ee waxtarka sare leh.
2. Qaybinta culeyska molikuyuulka ee sheygan waa mid cidhiidhi ah, waxa ku jira maadada polyetylen glycol ayaa hooseysa, heerka sii-haynta ee isku-xidhka laba-laabma wuu sarreeyaa, waxqabadka polymerization-ka ayaa si weyn loo hagaajiyay. Heerka beddelka sheyga ayaa sarreeya. Waxqabadka guud ee wakiilka ayaa ah mid aad u fiican. \_
3. Wakiilka biyaha yareeya oo ay soosaartay sheygan wuxuu leeyahay fir fircoonaanta fir fircoonida fir fircoonida iyo haynta, wuxuuna saameyn firidh wanaagsan ku leeyahay waxyaabo badan oo budo ah sida sibidhka Waxay leedahay heer sare oo biyaha yareeya iyo isticmaalka sibidhka oo hooseeya. Tayada sibidhka lagu daray waa 0.2% -0.5% Soo-dejiye biyo la taaban karo, heerka dhimista biyaha waxay gaari kartaa in ka badan 30%.
4. Ka dib markii lagu daro wakiilka yareya biyaha sibidhka, filim xayeysiis ah ayaa laga sameeyay dusha sare ee walxaha sibidhka, taas oo hoos u dhigaysa heerka fuuq-baxa ee sibidhka, waxay ka dhigaysaa koritaanka dhagaxa dhagaxa sibidhka mid aad u fiican, wuxuu yareeyaa waxyaalaha biyaha ka soo baxa uumi baxa, iyo qaab dhismeedka shabakada ayaa aad u cufan, kaas oo hagaajin kara la taabanka Xoogga ayaa ka badan 20%. Waxaa lagu dabaqi karaa xoog-sarreeya (ka sarreeya C60) shubka ganacsiga.
5. Wakiilka biyaha yareeya ee ay soosaartay sheydaan ayaa si weyn u wanaajin kara rheology-ka iyo balaastigga shubka. Waxay ku guuleysan kartaa dhismo la taaban karo iyada oo loo marayo is-socod, bamgareyn, iyo gariir la'aan, taas oo kordhin karta xawaaraha dhismaha isla markaana yareyn karta qiimaha dhismaha.
6. Badeecadani waa badeecad cagaaran oo bey’ada u roon, maadada chloride ion: ≤0.1%. U hoggaansanaanta heerarka maareynta ilaalinta deegaanka ee caalamiga ah ee ISO14001.
1. Badeecadani waxay leedahay milanka biyaha wanaagsan.
2. Badeecadani waxay adeegsaneysaa kalid firfircoon oo firfircoon iyo habka isku-dhafka gaarka ah. Qeybinta culeyska molikiyuulka waa cidhiidhi, maadada 'ethylene glycol' ayaa hooseysa, heerka celceliska dammaanad qaadkuna waa sareeyaa. Waxqabadka polymerization-ka si weyn ayaa loo hagaajiyay, heerka beddelaadda badeecaddu waa sarreysaa, badeecada yareysa biyaha polycarboxylic acid ee ay soo saartay oo ay soo saartay sheygu waxay leedahay nuxur wax ku ool ah oo sarreeya, biyo-soo-saaraha ayaa leh waxqabad dhammaystiran oo heer sare ah.
3. Waxqabadka iyo tusmada tayada ee soosaaraha biyaha soosaara:
1) Waxqabadka kharashka badan. Marka la gaaro isla heerka dhimista biyaha, waxay leedahay waxqabad qaali ah.
2) Qamriga hooseeya iyo heerka yareynta biyaha oo sarreeya. Wakiilka yareya cabitaanka khamriga oo ay ku jirto maadad adag oo ah 20% iyo heerka yareynta biyaha ee ah 1.0% (qadarka walxaha sibidhka) waxay gaari karaan 30-35%.
3) Haynta caag wanaagsan. Burburka burburka ee shubka ka dib 1h ayaa yar.
4) cimri dherer heer sare ah. Si weyn ayuu u yareyn karaa isticmaalka biyaha wuxuuna hagaajin karaa cimri dhererka shubka.
5) Cagaarka iyo ilaalinta deegaanka. Habka wax soo saar ee soo dejiyaha biyaha, ma jiro wax loo yaqaan "formaldehyde" iyo "chloride ion" waxyeello u leh deegaanka, maadada sulfate-na way hooseysaa.
jeex adag waa 25KG / bac;
60% wakiilka dareeraha ah: 1000 kg / durbaan, biyo badan, bacda dareere weelka
Gaadiidka iyo Kaydinta:
Badeecadani waa mid aan sun lahayn, ur lahayn, aan ololi karin, keydinta kiimikada guud iyo gaadiidka. Ku keydi bakhaar qabow, qalalan oo hawo leh.
hal sano (kaydinta xidhan ee heerkulka qolka)
Hore: Sodium Gluconate
Xiga: JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (Nooca Yaraynta Biyaha Sare)